ညီလင်းသစ်: ကိတ်မုန့်တစ်လုံး၏ ရှူတင်
Posted by ညီလင်းသစ် au 22.2.11
ဟုတ်တယ်နှော်။ မိုးရွာနေတာ ကွက်ကွက်ကလေး။ ပထမဆုံးမော်ဒန်ကိတ်ပိုစ့်မှာကတည်းက နောက်ခံ ဘက်ဂရောင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ထားပါလိမ့်လို့စဉ်းစားနေတာ။ ခုမှပေါ်တော့တယ်။ ကိတ်မုန့်လေးက ခုတော့ အကျဉ်းကျလို့ သူ့ခမျာ :-) ပိုစ့်တစ်ခုကို အစအဆုံး ကျောထောက်နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းတွေကအစ ရေးနိုင်တာကို ချီးကျူးမိပါတယ်။
:) မွေးနေ့ကိတ်မုန့်ဖြစ်ရတာ တော်တော်မသက်သာတာပဲ.. မီးတွေဝိုင်းထိုးထားလိုက်တာ ကိတ်မုန့်လေးသနားပါတယ်..
ကိတ်၁လုံးနဲ့ ပိုစ့်၃ခုဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တာလဲ ပညာပါပဲရှင်။
စိတ်ကူး။ ပြင်ဆင်ပုံ။ ဖြတ်သန်းပုံ။ ပြီးမြောက်ခြင်း ဒါတွေက ဆက်စပ်နေပေမယ့် .....
actနဲ့ artကြားထဲက အရာတွေပေါ့နော်။
ရိုက်ထားတဲ့ရှုတင်က မိုက်တယ်း)ဒီကရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းနား သွားရင်းလာရင်း ကြုံဖူးတယ်
ထရပ်ကားကြီးတွေ အများကြီးနဲ့ ကရိယာအစုံအလင်တင်ပြီး လမ်းတွေပိတ်ပြီးရိုက်တာ ဗျ ... စစချင်းတွေ့လိုက်တော့ အံသြမိတာအမှန်ဘဲ .. မှတ်မှတ်ရရ spider man ကားရိုက်တာ ကြုံဖူးလိုက်တယ်
မင်းသားမင်းသမီး တော့ မတွေ့လိုက်ရဘူး သူတို့က အချိန်တော်တော်ယူတော့ ကိုယ်လည်းစောင့်မကြည့်နိုင်လို့ ပြန်လာခဲ့တယ် ...
ဒီပို့စ်မှာ အစ်ကိုပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့က ဘာလဲဆိုတော့ ညီ ရလိုက်သလိုပဲ ဘယ်တော့မှ ကံဆိုးခြင်း ကံကောင်းခြင်းတွေက မစဲတဲ့ မိုးလိုရွာမနေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပေါ့ သူလည်း သူ့အတိုင်းတာကုန်လွန်သွားတဲ့နောက် အရာရာက နေသားတကျ ဖြစ်သွားတတ်တာပဲနော့် ပြီးတော့လည်း ပြီးသွားတာပဲပေါ့ ။
စာရေးကောင်းသလို စိတ်ကူး အိုင်ဒီယာလေးတွေလဲ သိပ်ကောင်းတာဘဲ
ဓာတ်ပုံရိုက်တာကို ဓာတ်ပုံပြန်ရိုက်ပြထားတဲ့ စိတ်ကူးမျိုးက တော်ရုံ စဉ်းစားမိမယ် မထင်ဘူး
ကိတ်မုန့်ပေါ်က အဓိပ္ပါယ်တွေလဲ သဘောကျတယ်
ရလဒ်တခုရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းလေးသိရလို့ 
(ဒါနဲ့ အဲဒီကိတ်မုန့်ကို စားဖြစ်ရဲ့လား)
ညကတည်းက အသစ်တက်တာ မြင်ပေမဲ့ အေးအေးဆေးဆေးဖတ်ပြီးမှ ကွန်မန့် ပေးချင်တာနဲ့ ခုမှ ရေးလိုက်တာပါ။
ကျမလဲ behind the scence တွေကို စိတ်ဝင်စားလေ့ရှိတယ်။ ဒီက ရုပ်သံမှာ တပတ်တခါ ပြနေတဲ့ human planet အစီအစဉ်မှာ ပြီးခါနီး ၁၀ မိနစ်လောက်ကို behind the lens ဆိုပြီး ပြလေ့ရှိတယ်။ ကြည့်တော့ မိနစ်ပိုင်းလေး ဘာမှ မဟုတ်သလို အခန်းလေးကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရိုက်ရတာတွေက ကြည့်လို့ ပိုကောင်းသလို ပိုလဲ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ ရုပ်ရှင်အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ နည်းနည်းနီးစပ်ပြီး ရုပ်ရှင်ခြံနားမှာနေတော့ ကိုညီလင်းသစ် ရေးထားသလို မီးသတ်ကားနဲ့ မိုးရွာတာတို့ ပန်ကာကြီးနဲ့ လေတိုက်တာတို့တွေ ငယ်ငယ်က မကြာခဏ ကြည့်ဖူးတယ်။ တခါတလေကျတော့လဲ ကြည့်ရတာ စိတ်မရှည်ဘူး ပျင်းတယ်။
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ဦးသုခရေးတဲ့ ချိုတကူးနဲ့ ဂုဏ်ရည်မတူ ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးတောင် သွားသတိရမိတယ်။
မွေးနေ့ကိတ်ပုံလေးရဖို့ ခုလို တပင်တပန်း ရိုက်ထားတာ ချီးကျူးပါတယ်။ ဒီလိုပြမှလဲ ရိုက်ကူးသူရဲ့ အားထုတ်မှုကို သိနိုင်မှာလေ ... ။
ကိတ်မုန့်လေးကို အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ အကြာကြီး မထားပါဘူး၊ ရှူတင်ပြီးပြီးချင်းပဲ အပြင်ထုတ်ပြီး စားပစ် လိုက်တယ်...၊း)
မွေးနေ့ကိတ်ဆိုတာ တခြား သာမန်ကိတ်တွေနဲ့ မတူဘူး လေ၊ သူက အထိမ်းအမှတ်တွေရဲ့ စတားပဲ၊ ဒီလောက် မီးထိုးတာလောက်တော့ သူကအပျော့ပါ...၊ ;-)
နောက်ထပ် ၂ ပုဒ်လောက် ဆက်ရေးဦးမလားလို့ စဉ်းစားနေတာ၊ အင်း..ဒီလိုဆိုရင်တော့ ရပ်မှပဲ..၊း)
ဟုတ်ပါတယ်၊ act နဲ့ art ကြားက always ရှိနေမယ့် authentic အကြောင်းတွေပါပဲဗျာ..၊
ကြုံတောင့်ကြုံခဲ့ အတွေ့အကြုံပါလား၊ အင်း..ပြန်လာတာ လည်း တမျိုးကောင်းပါတယ်၊ တော်ကြာ spiderman ရဲ့ ပင့်ကူမျှင်တွေက ကိုယ့်ကို လာငြိနေမှ ဒုက္ခ... ... ဟားဟား၊
ဟုတ်ပါတယ်ညီရေ၊ အဲဒါပါပဲ၊ အားလုံးဟာ ပြီိးသွားတော့ လည်း ဒီလိုပါပဲဗျာ...၊
ကျေးဇူးပါဗျာ၊ ကင်မရာတစ်လုံးအပေါ် အခြားဘဝတူ ကင်မရာတစ်လုံးရဲ့ အမြင် ဆိုပါတော့...အဟဲ၊
ကျနော်ကတော့ effect နဲ့ cause ကို ပြောင်းပြန် လုပ်မိ နေပြီနဲ့ တူတယ်နော်....၊
ဒါဆိုတော့လည်း ဝမ်းသာရပါတယ်ဗျာ၊ ကိတ်မုန့်ကို အဲဒီနေ့က တဝက်စားလိုက်တယ်၊ ကျန်တဲ့ တဝက်ကို ဆက်စားဖို့ မေ့သွားလို့ မှိုတက်သွားတာနဲ့ မနေ့ကပဲ လွှင့်ပစ်လိုက်ရတယ်... :( (အဲ, ငရုတ်သီးတွေတော့ ဒီအတိုင်း ရှိသေးတယ်)
ရိုက်ကွင်းတွေကို ခဏခဏ ကြည့်ဖူးတာ ကံကောင်းတာ ပေါ့၊ ကျနော့်မှာ အဲဒီလို အခွင့်အရေး မျိုး
မရခဲ့ဖူးဘူးဗျ၊ ဒီဗီဒီတွေက ပြသလောက်ပဲ ကြည့်နေရ တာ..၊
wow! quel effort pour obtenir une bonne photo!!!
မီးကင်ပြီးသား ကိတ်က ပိုစားကောင်းမှာပေါ့။
ဟိုအရင်က လက်ဝတ်ရတနာပုံတွေလဲ အခုလို
5D Mark II တွေ့တယ် :P
En fait, ce n'est encore rien par rapport à ceux qui restent dans l'eau pendant 8 heures pour prendre quelques photos d'un oiseau, par exemple. :D
ဒီလို ပြင်ဆင်တာတွေက အလေ့အကျင့်ရသွားတော့ လည်း သိပ်မကြာတော့ ပါဘူးဗျာ၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ အရင် လက်ဝတ်ရတနာတွေလည်း ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲ ရိုက်ခဲ့တာပါ၊ ဒီ စက္ကူပုံးနဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး၊ မီးကလည်း flash အပြင် စတူဒီယို မီးပါ သုံးပါတယ်၊ အခြေခံကတော့ အတူတူ ပါပဲ၊
Waow... မျက်လုံး တယ်ကောင်း ပါလား..၊ :)
ပာုတ်တယ်နော်... ကိုညီလင်း။ Making of ... ကြည့်လိုက်ရင် ရုပ်ရှင်က ပေါ့ရွှတ်ရွှတ် ဖြစ်သွားတယ်။ ရို့စ်လည်း နှစ်သက်တယ် သူတို့ ဘယ်လို ရိုက်ထားလဲ ဆိုတာ ပြတာကိုလေ။ သရဲကား ကြည့်ပြီး ကြောက်နေတုန်း Making of ... ကြည့်လိုက်ရင် အကြောက်ပြေသွားတယ်။ ဒါတော့ ကောင်းတယ် ပီားးး။ သြော်... အဲ့ဒီလို ဓာတ်ပုံ လှလှလေး ရဖို့ အပင်ပန်းခံ အချိန်ပေးပြီး ရိုက်ရတာပေါ့နော်။ အတုယူသွားပါတယ်။
မစူနွယ်လေးရေးသွားတာကို ဖတ်ပြီးတော့မှ ပုံတွေကို သေချာပြန်ကြည့်သွားတယ်။ ” ဟိုက် ရှားပါး ” လို့အော်ချင်သွားတယ်။ ကိုညီလင်းက ပရောဖက်ရှင်နယ်ကြီး ပါလား.. :-)
အင်း..အဲဒီလို သရဲကားရဲ့ making of ကို ကြည့်နည်း လည်း မဆိုးဘူး၊ အိမ်မက်ထဲထိ ထည့်မမက်တော့ဘူး ပေါ့...၊း)
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မှာတောင်မှ 'ကြီး' ထည့်လိုက်သေး တယ်...ဟုတ်လား..ဟားဟား၊ မပရို ရပါဘူးဗျာ၊ အဝေးကြီး လိုပါသေးတယ်..၊
ကျွန်တော်လည်း making of တွေပြန်ပြရင်သိပ်သဘောကျ
တယ်...၊၂ခါ ၃ခါ ပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်..။ဂျက်ကီချန်းကား
May everybody be happy and healthy ...
လာလည်တာရော၊ ကွန်မန့်အတွက်ပါ ကျေးဇူးပါဗျာ..၊
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ဂျက်ကီချန်း ကားတွေရဲ့ အဆုံးမှာ ပါတဲ့ making of တွေကို ကျနော်လည်း အရမ်း သဘောကျ တယ်၊ ဇတ်ဝင်ခန်းကို ပြန်ရိုက်ပြတဲ့အပြင် သူတို့ အမှား လုပ်ထားတာတွေကိုပါ ပြထားတာ ရီရတယ်...။
အစ်ကိုလုပ်ထားတဲ့softboxလေးကိုသဘောကျတယ်ဗျာ။ အဆင်ပြေရင် softboxလုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးပါရေးပါ့လား။
ကျနော်ရေးဖြစ်မှာပါ၊ အဲဒီ softbox ကို လုပ်ကတည်းက ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ရေးဖို့ ရည်ရွယ်ထား ပါတယ်..။
စဉ်းစားစရာ ရသွားတယ်ဗျာ။ ဒါနဲ့ ..."ဟုတ်ပါတယ်၊ act နဲ့ art ကြားက always ရှိနေမယ့် authentic အကြောင်းတွေပါပဲဗျာ.." ကိုမြင်တော့ ဟိုနေ့က ဘိုဘိုလန်းစင် စီကဖတ်ခဲ့တဲ့ "Burmlish" ကို "ဘာရယ်မဟုတ်" သွားသတိရမိတယ်။
ကိုညီလင်းက စာရေးတာရော၊ ဓါတ်ပုံရိုက်တာရော စနစ်တကျရှိပြီး စိတ်လဲ တော်တော်ရှည်တာပဲနော်...။ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အကြောင်းကို စာနဲ့ရေးပြတာရော၊ ပေးချင်တဲ့ message လေးကို ပါးပါးလေး ချပြတာရောကိုလည်း သိပ်သဘောကျသွားတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ရုပ်ရှင်တွေအပြီးမှာ ကြည့်ရတတ်တဲ့Making of တွေကို သဘောကျတယ်...
ဒါနဲ့ စကားမစပ် 5D Mark II ကို ဘာနဲ့ ပြန်ရိုက်ထားတာလဲဟင်...း))
ကို Raymond ကျော်မင်းနိုင် ...
ကော်ဖီကြိုက်တာအပြင် making of ကြိုက်တာလည်း လာတူနေပြန်ပြီ..၊း) 5DmkII ကို 450D နဲ့ ပြန်ရိုက် ထားတာပါ၊ 24-105mm တပ်ပြီးတော့..။